FFU fan lemifanekiso unit Factory | I-china FFU fan filter unit Manufacturers, abahlinzeki
isihlungi se-aluminium esingashintshwa esingahlungelwa kuqala
Isihlungi sisebenzisa i-polyester fiber yokwenziwa entsha njengezinto zokuhlunga, ngemuva kokubumba, inokusebenza okuphezulu kokuhlunga, umthamo omkhulu wokubamba uthuli, nokumelana okuphansi ngesihlungi esingashintsheka, izindleko zokusebenza eziphansi nezinye izici.
uhlobo lwethangi elingafani nokwahlukanisa ukusebenza kahle okukhulu
l asikho isihlungi sokuvuza esingafakwa ngenxa yokusetshenziswa kwento ekhethekile efana nokubekwa uphawu kwe-gel.
partiton pleat high efficiency capacity HEPA filter for electronics Igumbi elihlanzekile lemithi yaseshashalazini
Isihlungi sisebenzisa i-ultra-fine glass fiber paper njengempahla eluhlaza, nephepha le-offset njengebhodi lokuhlukanisa, elenza ngebhokisi lashukumisa, i-aluminium alloy ne-glue. Lo mkhiqizo unezici zokusebenza okuphezulu kokuhlunga, ukumelana okuphansi, umthamo omkhulu wokubamba uthuli nentengo yokonga. Isetshenziswa kabanzi ekugcineni kokuhlanzwa komoya kohlelo lokupholisa umoya jikelele, uhlelo lokuhlanzwa komoya kanye nesistimu yokuphakelwa komoya okusha. Ngokuvamile, izinga lokushisa elincane lingaphansi kwama-degree angama-60. Izinto zomngcele ibhokisi lashukumisa nohlaka lwe-aluminium.
Isihlungi esisebenza kahle se-V-
Idizayini emiswe ngo-V enesihlungi esincane kakhulu se-pleat, inendawo yokuhlunga kunesihlungi sendabuko. Indawo enkulu yesihlungi ingaphatha ivolumu yomoya emikhulu, igcine ukulahleka kwengcindezi ephansi futhi inwebe impilo yensizakalo yesihlungi. Hlunga impahla: okokuhlunga impahla isebenzisa abahle kakhulu bengilazi yefayibha ehlanganiswe ohlakeni ngokuncenga.Iphepha lesihlungi lihlukaniswe ngukuncibilika okushisayo, futhi lisetshenziswa kakhulu kuma-air-conditioners nakweminye imikhakha enezidingo eziqinile emoyeni.
ukusebenza kahle okuphezulu ngokuhlukanisa akukho ukwahlukanisa umoya ophumayo
Isetshenziswa kakhulu ekunikezelweni komoya ekugcineni kwesitshalo esihlanzekile, njenge: eyenza imithi, ezokwelapha, ukudla, i-elekthronikhi, ukumboza ngokunemba nezinye izimboni.
Imikhiqizo isebenzisa ukuminyaniswa kwemishini, futhi izinto zebhokisi yi-GB ipuleti elibandayo elibandayo.
Ukwelashwa kwebhokisi ebusweni kuthola isifutho se-phosphating, ngokumelana nokugqwala okuqinile.
FL uchungechunge lokushisa okuphezulu komoya isihlungi sisebenzisa i-ultrafine ingilazi yefayibha njengephepha lesihlungi, i-aluminium foil njengesihlukanisi, nensimbi engagqwali njengohlaka. It is uphawu futhi ifakwe amazwe lokushisa eliphezulu iraba. Isihlungi ngasinye sidlulise ukuhlolwa okunzima ngokusebenza kahle kokuhlunga, ukumelana okuphansi, umthamo omkhulu wokubamba uthuli, nokumelana nokushisa okuphezulu. Ikakhulu okokusebenza kokuhlanzwa komoya okuphezulu kanye nezinhlelo ezidinga imigqa yokukhiqiza yokumboza ephezulu njengokuma
isihlungi somoya esiyinhloko sensimbi yonke
Okokuhlunga, kunensimbi engagqwali ephothiwe noma ye-aluminium eluka yamagagasi wokuwela aqonde phezulu nangaphezulu. Ubukhulu obujwayelekile bokushuba buyi-intshi eyodwa no-2 amayintshi. Okokusebenza kozimele, ungakhetha uhlaka lwensimbi olungagqwali noma ifreyimu ye-aluminium efanelekayo imishini yokuphefumula yezimboni enokulahlekelwa kwengcindezi ephansi nokuqoqwa kothuli oluphezulu. Kulula ukuyihlanza nokuyigcina, yonga izindleko.
iphepha ibhokisi lekhadibhodi ifreyimu yokuhlunga eyinhloko yokwenziwa komoya
Isihlungi sisebenzisa i-fiber yokwenziwa entsha nengilazi yefayibha njengezinto zokuhlunga, ngemuva kokugoqwa, inokusebenza okuphezulu kokuhlunga, amandla okuphatha uthuli, ukumelana okuphansi nezinye izici. Isetshenziswa kabanzi ekuhlanzweni komoya okusha komoya kohlelo lokupholisa umoya jikelele, uhlelo lokuhlanzwa komoya kanye nesistimu yokuphakela umoya omusha, ingasetshenziswa njengesihlungi sangaphambi kokuhlunga okuphakathi kokunwebisa impilo yenkonzo yayo. Ngokuvamile ukushisa kwayo okusetshenzisiwe kungaphansi kwama-93 degrees.